मनसुनअगावै डेंगु : संक्रमण व्यापक हुन सक्ने विज्ञको चेतावनी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ ३१, २०७६ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — यसपटक मनसुनअगावै डेंगु फैलिएकाले संक्रमण अझ बढ्न सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । धरानमा व्यापक भइसकेको डेंगु बिस्तारै मोरङ र झापामा समेत फैलँदै छ ।
‘मुख्य रूपमा बर्सेनि मनसुनपछि दसैं–तिहारतिर डेंगु देखिने गर्थ्यो,’ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका डा. शेरबहादुर पुनले भने, ‘मनसुनअगाडि नै यति धेरै ठाउँमा डेंगु देखिएको पहिलोपटक हो ।’ गत वर्ष दसैं–तिहारतिर राजधानीको बालाजु क्षेत्र र पोखरामा डेंगु संक्रमण देखिएको थियो ।
कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, हेटौंडाका निर्देशक डा. अनुज भट्टचनले डेंगु फैलाउने लामखुट्टे भएका ठाउँमा जुनसुकै समय प्रकोप फैलिन सक्ने भएकाले नियन्त्रणका लागि समाजदेखि विभिन्न निकाय सघन रूपमै लाग्नुपर्ने बताए । उनले प्रकोप कुर्नुभन्दा अघि नै यसको नियन्त्रण, व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘मुलुकमा जहाँ एडिस एजिप्टाई जातको लामखुट्टे छ त्यहाँ अनुकूल परिस्थिति निर्माण हुनासाथ प्रकोप फैलिने सम्भावना छ,’ पुनले भने, ‘कहाँ–कहाँ यस्तो लामखुट्टे छ, सरकारले विस्तृत अध्ययन गरेर जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’
मुलुकमा बढ्दो सहरीकरण, यातायात पहुँचसँगै तापक्रम वृद्घिले डेंगुको जोखिम अत्यधिक बढेको छ । हाल डेंगु प्रभावित ठाउँबाट संक्रमित व्यक्ति डेंगु फैलाउने लामखुट्टे भएको अन्य ठाउँमा जाँदा त्यहाँसमेत संक्रमण फैलने सम्भावना उच्च छ । डेंगु भाइरस मुख्य रूपमा पोथी एडिस एजिप्टाई लामखुट्टे र थोरै मात्रामा एडिस एल्वोपिक्ट्सबाट फैलिन्छ ।
दिउँसो टोक्ने यी लामखुट्टेले नै चिकनगुनिया, यलो फिभर, जिका संक्रमणसमेत फैलाउँछन् । संक्रमित व्यक्ति नयाँ ठाउँ जाँदा त्यहाँ रहेको डेंगु फैलाउन सक्ने लामखुट्टेले उसलाई टोकेर संक्रमित हुन्छ । संक्रमित लामखुट्टेले अन्य व्यक्तिलाई टोकेपछि नयाँ ठाउँमा पनि संक्रमण फैलन्छ । डेंगु फैलाउने लामखुट्टे भएका स्थान पहिचान गरी स्थानीयलाई यो संक्रमणबारे सजग गराउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको विज्ञहरू औंल्याउँछन् । हाल डेंगु ‘डेन २’ सेरोटाइपको भाइरसले फैलाइरहे पनि मुलुकमा यो संक्रमण फैलाउने ‘डेन १, डेन २, डेन ३, डेन ४’ गरी चार प्रकारका भाइरस देखा पर्ने गरेका छन् ।
टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे भन्छन्, ‘समुदायमा सबैले एकसाथ लामखुट्टेविरुद्घको गतिविधि सञ्चालन नगरेसम्म त्यो ठाउँविशेषलाई यसको प्रकोपबाट जोगाउन गाह्रो हुन्छ ।’ टेकु अस्पतालको रेकर्ड औंल्याउँदै उनले मधेसका सबै ठाउँसहित ४० जिल्ला डेंगु जोखिमयुक्त रहेको जानकारी दिए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार डेंगुको कुनै विशिष्ट उपचार छैन । छिटो रोग पत्ता लगाउनुका साथै उचित चिकित्सकीय हेरचाह पुर्‍याउन सके मृत्युदर १ प्रतिशतभन्दा कम हुन सक्छ । प्लोस नेग्लेक्टेड ट्रपिकल डिजिजमा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार १ सय २८ मुलुकका ३ अर्ब ९० करोड जनसंख्या डेंगुको जोखिममा छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ ०७:२३
काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन कानुनसम्मत रहेको बताएका छन् । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनमा प्रस्ट उल्लेख भएअनुसार कर्मचारी माग गरिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
मन्त्री बाँस्कोटाले राज्यव्यवस्था समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन आउला जस्तो नलागेको बताए । ‘उहाँहरूले धेरै बुझेको हो कि नबुझ्या हो,’ उनले भने । मन्त्री बाँस्कोटाले आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने नगर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री फर्किएपछि टुंगो लाग्ने बताए ।
मन्त्री बाँस्कोटाले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने विषय पनि विवादित बन्न सक्ने बताए । ‘राजनीतिक तहबाट नियुक्ति भयो, नातेदार छानिए भन्ने कुरा आउला, फेरि जुलुस लाग्ला,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नुपरेको छ, यसका लागि तत्काल कर्मचारी नियुक्ति गरेर संक्रमणकाल अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालका अनुसार ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ६७ हजार दरबन्दी छ । ‘संविधानले अधिकार क्षेत्र सूचित गरेका काम गर्न यति दरबन्दी चाहिन्छ भनेर हामीले सिर्जना गर्‍यौं । यो मन्त्रिपरिषदबाट समेत स्वीकृत भएको हो,’ उनले भने, ‘यही दरबन्दीअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन ०७५ जारी भएको हो ।’
उनले कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम करिब ४२ हजार कर्मचारी मात्र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकेको जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहमा अहिले पनि करिब २५ हजार दरबन्दी रिक्त छ,’ उनले भने, ‘यो संख्या ठूलो हो, जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारी नभएर काम गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।’
प्रदेश लोकसेवा अयोग गठन नभएको अवस्थामा संघीय लोकसेवा आयोगले नै प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहले माग गरेको अवस्थामा पदपूर्तिसम्बन्धी काम गरिदिने कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ अनुसार स्थानीय तहमा पत्राचार गरिएको बरालले जानकारी दिए ।
‘तपाईंहरूलाई कर्मचारी आवश्यक भए केन्द्रीय आयोगले भर्नासम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ, माग्नुस्, फास्ट ट्र्याकबाट कर्मचारी पदपूर्ति गर्न मन्त्रालयले समन्वय गर्छ भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘६ सय ४ वटा स्थानीय तहबाट १५ हजार दरबन्दी पदपूर्तिका लागि माग भएर आयो । त्यसलाई आयोगमा पठायौं । त्यसपछि विज्ञापन गरिएको हो ।’ समावेशिताका विषयमा मन्त्रालयको भूमिका रहने कानुनमा उल्लेख नभएको उनले बताए । ‘हामीले सिट संख्या पठाइदिने हो, आयोगले प्रचलित कानुनअनुसार समावेशीको सिट र पद संख्या निर्धारण गर्ने हो,’ उनले भने ।
'प्रेसमाथि तरबार चलाउन खोजेका छैनौं’
मन्त्री बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा त्रुटि भए छलफल गर्न सकिने बताए । ‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारले तरबार चलाउन खोज्या होइन,’ उनले भने, ‘मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रेस काउन्सिल नै चाहिँदैन, स्वनियमन नै पर्याप्त हो । स्वनियमन भनेर फेरि जे पनि गर्न त हुँदैन, त्यसको पनि मौलिक पद्धति र प्रक्रिया हुनुपर्‍यो ।’
उनले संसदमा विधेयक दर्ता भएपछि सरकारको काम सकिने बताए । ‘विधेयक दर्ता भएपछि संसदमा आफ्नै प्रक्रिया छ । त्यहाँ छलफल हुन्छ, त्यहींबाट टुंगो लगाउन सकिन्छ,’ ‘संशोधनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा सरोकार राख्नेले पनि लबिङ गर्ने ठाउँ संसद् नै हो ।
उनले पत्रकारको श्रम र पत्रकारिताको पनि सुरक्षा हुनुपर्ने बताए । फिल्म व्यंग्यात्मक समीक्षा गरेको विषयमा पक्राउ परेका प्रनेश गौतमबारे राम्रोसँग थाहा नभएको दाबी बाँस्कोटाले गरे । ‘उजुरीकर्ताले उजुरी गरे होलान्, कुन कानुनअन्तर्गत गरे,’ उनले भने, ‘उजुरी परे प्रहरीले समात्छ ।’ उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली निर्माण व्यवसायीको माग सुनेपछि संशोधन गरेको बताए । ‘निर्माणमा ढिलाइ नहोस् भन्ने धारणा सरकारको हो । काम गर्छौं भन्नुभएको छ । सुध्रन र सुधार्न दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ ०७:२२